October 11, 2020 Dai 8, 2022 0
Kutambura kuti unzwe vavengi pane vatauri veTV yako? Musoro wepamusoro unogona kushandura ruzivo rwako rwekutamba
Nekuvhurwa kwePS5 uye Xbox Series X / S iri kusvika nekukurumidza, hapana imwe nguva iri nani yekudyara mune hombe yemitambo mahedhifoni.
Kusarudzira akanakisa ako iwe kunogona kuve kunonyengera hazvo: ndeye isina waya yemusoro inokoshesa iyo yekuwedzera mari kana iwe unofanirwa kunamatira kune yakasungwa wired? Mhere-yekudzima mamikisi ingori kushambadzira bluff kana ivo vanoshanda chinangwa?
Pane mibvunzo yakawanda iwe yaunogona kuzvibvunza iwe, asi isu tiri pano kuti tibatsire. Pazasi, iwe unowana yakazara yekutenga gwara uye seti yemaoko-akasarudzwa mahedhifoni atingakurudzira - zvisinei kuti yakawanda sei iwe yaunofanira kushandisa.
Zvakanakisisa zveakanakisa ini Razer Blackshark V2
Iyo Razer Blackshark V2 ndiyo chaiyo yakanakisa yemitambo mahedhifoni aunogona kutenga. Iine THX Spatial Audio, dzakasiyana siyana odhiyo uye mic maitiro ekugadzirisa, uye dhizaini yakasununguka, hapana zvirinani zvirinani.Tenga izvozvi
Kupenya kwese-kutenderera | Fnatic REACT
Iyi sub- £ 100 headset inopa inonakidza ruzha uye maikorofoni mhando uye yakasarudzika, yakasununguka yakakodzera kune vanokwikwidza vanokwikwidza.Tenga izvozvi
Maitiro ekusarudza akanakisa emitambo mahedhiyo iwe
Wired vs wireless mahedhifoni
Iyi inouya pasi pane zvaunofarira uye bhajeti yako. Mazhinji mahedhifoni asina waya anodhura premium sezvo tekinoroji inodhura zvakanyanya kugadzira. Bhenefiti yekuve isina waya mahedhifoni ndeyekuti iwe unogona kugara pasofa rako, usingatombonetseke nezvekuvharirwa mune yako headset kana koni. Zvakakodzera kuti urangarire, zvakadaro, kuti kana iwe uri kushandisa DualShock 4 kana imwe yeayo matsva Xbox One madhairekita, aya ane headset socket mune mutongi saka haudi tambo dzakatambanuka mukamuri.
Kubatsira kweiyo isina waya yemusoro ndeyekuti inokupa rusununguko rwakazara kufamba, pamwe ne - mune zvimwe zviitiko - 5.1 kana 7.1 kutenderera kurira. Chinhu chikuru chinokanganisa ndechekuti isina waya yemusoro inofanirwa kudzoreredzwa - kungave kuburikidza neyakavakirwa-mukati-lithium-ion bhatiri kana kuburikidza neanogona kuchinjika anodzoreka mabhatiri. Mimwe misoro yemitambo iko zvino yave kukwanisa kubhadhariswa zvisina waya, asi iwe unowanzo fanirwa kugadzira fori Qi yega yega.
Kana ari mahedhifoni ane waya, pane zvakanakira kupfuura vamwe vavo vasina waya. Izvi zvinowanzo kukupa kujekesa mhando yemodhiyo, kunyangwe mutsauko mazuva ano uri mushoma.
Zvakakosha here kuisa mari mune 5.1 kana 7.1 mahedhifoni?
Mimwe misoro yemitambo inopa chaiyo yakatenderedza-ruzha modhi iyo inogona kuiswa kana kuvharwa - iriko mune iyo ine 5.1, 7.1 kana logo yeDolby pairi. Nezve mabhenefiti, ivo havana chokwadi. Isu tinowanzo kuwana mahedhifoni ane rakapoteredzwa ruzha runopwanya iwo ruzha mhando kana kuti riite kuti rive shoma pane zvimiro zvemamiriro (senge tsoka). Muchokwadi, kumitambo yakawanda yemakwikwi, tinozviwana tave kudzima ficha yacho. Zvakadaro, zviripo iwe kana ukasarudza kuzvishandisa.
Kana ndikashandisa mari yakawanda pamahedhifoni, ndichave neruzivo rwuri nani here?
Kazhinji kutaura, paunowedzera kubhadhara iyo headset yemitambo, ndipo paunowana maficha. Ehe, pane mamwe mabhenji ayo anobhadharisa premium kungova nezita ravo pazvigadzirwa - asi dzimwe nguva iyi premium ndeyechikonzero chakanaka. Ruzha rwemhando uye nyaradzo hunhu hwakakosha kune vese, saka kana iwe ukatsvaga yakanyanya kugadzikana, yakanyanya kurira mahedhifoni ane akanyanya maficha (senge wireless technology kana Bluetooth), tarisira kuibhadhara zvakanyanya.
Izvi hazvireve kuti yakachipa seti yakaipa - kure nazvo, sezvo vamwe vachipa yakasarudzika kukosha kwemari. Asi, sekune chero chinhu, kuzvimisikidza bhajeti kwakakosha. Kana uchinge waisa yako yepamusoro mutengo, enda nekutsvaga yakanakisa mahedhifoni aunogona kuwana pane izvo zvaunoda kubhadhara. Tine chokwadi chekuti iwe uchawana imwe mumatanho edu epamusoro pazasi.
Saizi yekutyaira ine basa here?
Kune mahedhifoni ane ese marudzi ese ehunhu hwakasiyana, asi kazhinji unozo tarisa saizi yemutyairi, saizi yediki mutauri kana chemagetsi chinhu chinogadzira ruzha. Saizi haigare ichinetsa, asi sekutonga kwese kwechigunwe, iyo yakakura dhayamita yemutyairi, inowedzera nzvimbo ichafanira kuburitsa ruzha. Nekudaro, iwe ungangowana hunyoro hwemhando yepamusoro kubva kune mutyairi mukuru kana kuva nenzvimbo yakafara - izvo zvinoita mutsauko kana iwe uchitamba.
Maikorofoni-yekudzima ruzha inodiwa here?
Mheremhere-yekudzima maikorofoni haisi iyo inofanirwa, asi kana ukatamba munzvimbo ine ruzha, iwe uchaona kuve uine mic iyo inongobata izwi rako inozoguma mune chiitiko chiri nani kune avo vari kukuteerera iwe mumutambo.
Ndinofanira here kutenga zviri pamutemo marezinesi mahedhifoni eangu Xbox One kana PS4?
Pakupedzisira, mahedhiyo ane rezinesi anongopa mashoma ekuwedzera mashandiro. Enzaniso dzinosanganisira bundled adapta yekubaya mune imwe yekutanga-chizvarwa Xbox Rimwe vatongi kana mu-mutambo kurira kurudziro. Isu hatidi kukurudzira kutsvaga chigadzirwa chine rezinesi, asi ivo havasi vasina zvazvakanakira.
Iwo akanakisa emitambo mahedhiyo ePS4 uye Xbox One
1. Venom Saber: Iyo yakanakisa bhajeti yemitambo mahedhifoni
Budget yemitambo mahedhifoni ane gumi-peni asi mashoma anounza nyaradzo uye mashandiro eVenom Saber. Kugadzira yakasimba bhanhire repamusoro mukufarira inochinjika, yekuzvigadzirisa yekumisa bhanhire, iyo Saber inokwana mushe pamisoro yeese maumbirwo uye saizi. Huru, denderedzwa nzeve dzakaputirwa zvakanaka uye dzinogadzira chisimbiso chakanaka pamusoro penzeve dzako, kucheka huwandu hwakaenzana hweruzha rwezvakatipoteredza kubatsira kubatsira kunyudzwa kwako.
Mutinhimira unonakidza, kunyanya uchipihwa iwo mutengo weSabre unonzwisisika. Mids uye treble zvinoburitswazve zvine ruzivo asi hapana kushomeka kwemabhasi. Iwo madhiraivha e50mm akaita basa rinogutsa rekutsanangudza kukonzeresa kwepfuti uye kuputika muIkupedzisira Kwedu Chikamu II uye zvakare vachiona kuti huwandu hwakawanda hwekutaurirana hwaive hwakajeka uye hwakajeka. Subtler inonzwika senge tsoka dzevavengi dzakamiswa nenzira kwayo musoundstage, zvakare, izvo zvisingawanzo kuita nemusoro unodhura. Maikorofoni yeSabre inodzoserwa, zvichireva kuti inogona kubviswa kana isiri kushandiswa. Iyo yakasarudzika dhizaini sarudzo iyo inosimudzira imwe neimwe isingatarisike mic inoshanda zvakanaka uye inoshandurwa nyore nyore kuburikidza neyemusoro-soro mune-mutsara kudzora.
Misoro yemusoro yakachipa kashoma kurira, tarisa kana kunzwa izvi zvakanaka. Kana iwe uri kuda kugadzirisa yako yemitambo ruzivo pane bhajeti, kuwedzera iyo Venom Saber kune yako arsenal inzvimbo yakanaka yekutanga.
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Aihwa; Amp / kure: N / A
Venom Saber Universal Stereo Gaming Headset (PS4 / Xbox One / Shandura / PC / Mac) (PS4)
£ 28.93 Tenga izvozvi
2. Razer Blackshark V2: Iyo yakanakisa yeakanakisa
Price: £ 100 l Tenga izvozvi kubva kuRazer
Pasina kupokana, iyo Razer Blackshark V2 ndiyo yakanyanya kunaka mitambo yemitambo pamusika. Yakanyanya kugadzikana, iine huwandu hunokatyamadza hwekuteerera uye mic inoburitsa kudzoreredza kuburikidza neRazer's Synapse software, iyo Blackshark V2 yakanakisa wired yemitambo headset inotsigira PC, Xbox One, PS4, Nintendo Shandura uye chero smartphone ine 3.5mm headphone jack.
Iwo makuru 50mm madhiraivha anobatsira kugadzira rakasarudzika ruzha, achiendesa kristaro-yakajeka odhiyo kuburikidza neTX Spatial Audio kuburikidza neakaisirwa 7.1 chiteshi kurira kadhi rePC. Iyo mic inosvikika inoitawo basa rakanaka pakubvisa pesky ruzha rwekunze, pasina kukanganisa hunhu hwezwi. Ehezve, iyo yega yekumashure (kunze kwemutengo) ndeyekuti iyo Blackshark V2 haina waya. Nekudaro, iyo refu 1.8m tambo inofanirwa kuita basa kunyangwe iwe uri kuiisa mune mutungamiriri kana muPC yemitambo pasi petafura yako.
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One, Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm, USB kadhi rezwi; Yakakomberedza ruzha: THX Spatial Audio; Ruzha-kudzima mic: Ehe
2. Logitech G332: Iyo yakanakisa mitambo yemitambo pasi pe £ 50
Iyo Logitech G332 ndeye inodhura yemitambo mahedhifoni iyo inosimudzira nyaradzo, yakanakisa kurekodha mhando uye kuyambuka-chikuva kuenderana. Iyo flip-to-mbeya maikorofoni inonzwisisika uye ine vhiri pane iyo kuruboshwe mukombe, zviri nyore kugadzirisa vhoriyamu rehorofoni. Iyo G332 ine dzimba hombe 50mm madhiraivha uye semhedzisiro ine yakafara mapedhi anogara akatenderedza nzeve dzako - ivo vanonyanya kugadzikana. Mune hunhu hwavo chaihwo, aya madhiraivhi mahombe anopa ruzha rwakakura Chishandiso kupatsanura ndicho chinhu chakakosha kwazvo sezvo iwe uchanzwa tsoka dzevavengi kubva kure uye uchikwanisa kusiyanisa mamiriro ezvinzvimbo zviri nyore.
Sonically, ine inodziya, inonakidza kurira siginecha ine akawanda mabass uye anotenderera kuti urambe wakakiya mumutambo wako. Kune iri pasi pe £ 50, iyo G332 sarudzo yakanakisa yevatambi. Kana iwe uchida chiitiko chakafanana, asi uchida kuwedzera izwi rakakomberedza uye sarudzo USB kadhi redhiyo mumusanganiswa, tora iyo dearer Logitech G432 musoro panzvimbo.
Key specs - Mafurati: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / kure: N / A
Logitech G332 Wired Gaming Headset, 50 mm Audio Drivers, Rotating Leatherette Ear Cups, 3.5 mm Audio Jack, Flip-to-Mute Mic, Lightweight yePC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Chinja - Nhema / Tsvuku
£ 39.95 Tenga izvozvi
Logitech G332 SE Stereo Gaming Headset yePC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja
$64.99 Tenga izvozvi
3. EKSA E900 Pro Stereo: Iyo yakanyanya kugadzikana yemusoro pasi pe £ 50
EKSA E900 Pro inonyanya kunakidza mitambo yemitambo. Iyo nzeve uye bhandi repamusoro zvinogona kunge zvisiri zvakanyanyisa asi zvakapfava zvakanyanya vachiri kugadzira chisimbiso chakakomberedza nzeve dzako.
Iwe une sarudzo yesarudzo mbiri dzekubatanidza - inowoneka USB-A uye 3.5mm tambo dzinopihwa uye plug mune yekuruboshwe nzeve yehedhifoni. Panzvimbo pekungwara, iwe unogona kukiya iyo 3.5mm jack mune headset chiteshi, ichidzivirira kuti isaburitswe kunze kana iwe ukazonyanyisa-kufara kana RNG ichikukomborera neisina kujairika donhwe. Zvakare zvakavakirwa kuruboshwe nzeve ndeye nyore-kuwana-kuwana mic-muting bhatani uye vhoriyamu scroll wheel.
EKSA E900 Pro inonunura yakasimba odhiyo asi mabass anogona kunge ari mashoma zvakanyanya pahuwandu hwehuwandu, zvichikonzera pa-screen chiito kurira matope. Zvinhu zviri nani kana iwe uchiteerera pazasi vhoriyamu uye pane iyo yese, iyo E900 Pro inobata mazhinji mafirosheni zvakanaka. Kana iwe uchinakidzwa nenzvimbo yePc yemitambo padivi, iwe unozogona kushandisa iyo E900 Pro's 7.1 kutenderera kurira, kana iwe uchinge warodha pasi mutyairi kubva kune iyo webhusaiti yekambani. Iyo mic inosvikika yakaratidza kudzikama, zvakare, ichitora izwi rangu zvakajeka uye pasina mhinduro.
Ultra-yakagadzikana uye inochinja-chinja kubhutsu, iyo EKSA E900 Pro inoyevedza, inodhura mahedhifoni emitambo.
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm / USB-A; Yakakomberedza ruzha: PC chete; Ruzha-kudzima mic: Aihwa; Amp / kure: N / A
EKSA 7.1 Yakakomberedza Ruzha USB Mutambo Musoro Headset Xbox Imwe Musoro neRuzha Kanzura Mic, LED Mwenje, Mahedhifoni ePS4 / Xbox One / PC / Chinja neInogona Kuwanikwa Mic & 3.5mm, USB Tambo
£ 39.98 Tenga izvozvi
4. Sandberg Dizruptor: Yakanakisa yekupinda-chikamu chakatenderedza mutsindo mahedhifoni
Price: £ 41 | Tenga izvozvi kubva kuSandberg
Sandberg's Dizruptor headset iguru bhajeti wired USB headset inopa yakakomberedza ruzha iyo isingakanganise huwandu hwenzwi, kusiyana nemamwe mahedhiyo e7.1 atakaedza. Tichiri kutamba Nioh 2 panguva yekuyedzwa, isu taigara tichikwanisa kutora madhairekodhi ehurukuro sezvo vavengi vakativharira kana kuvanda mumimvuri tichigadzirira vavandiri.
Mahombekombe makuru eDizruptor, ane matanda akapfava anonakidza uye bhanhire remusoro rinotambanuka rwoga kuti rikwane musoro wako, iko kubata kwakanaka. Microphone mhando yeakadai isingadhuri mahedhifoni ndeye yepamusoro-notch, futi. Isu takanzwikwa zvakajeka uye nemazvo nguva dzese uye iyo mic inosanduka inogona kubviswa munzira kana isiri kushandiswa, kunyangwe pasina nzira yekuimisa. Iyo Dizruptor imwe chete diki nyaya ndeyekuti inoda kuvharirwa mukati kuburikidza ne USB Type-A chinongedzo chakabatanidzwa kune yayo nylon-yakarukwa tambo. Iyo tambo ndeye 2.2m kureba saka haufanire kugara padhuze neconsole yako, asi sarudzo yekuibaya yakanangana nemutongi wako kuburikidza ne3.5mm jack ingadai yakave yakanaka.
Iyo Dizruptor ndeye yakanakisa bhajeti kutenga, pamusoro pezvakambotaurwa zvayakanakira, zvakare ine RGB mwenje pane nzeve kuti uwedzere imwe vara kune yako yekutamba nguva.
Key specs - Mafurati: PC, PS4, Xbox Rimwe; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: USB Type-A; Yakakomberedza ruzha: Ehe; Ruzha-kudzima mic: Aihwa; Amp / kure: Aihwa
Tenga izvozvi kubva kuSandberg
5. Vimba GXT 488 Forze-B: Yakanakisa bhajeti yemusoro wevanoda PlayStation
Price: £ 30 | Tenga izvozvi kubva kuMutambo
Kana iwe uchida iyo PlayStation ecosystem, iyo Trust GXT 488 Forze-B ndiyo bhajeti yemitambo yemusoro wako. Inobvumidzwa zviri pamutemo uye yakanyatsogadzirirwa PlayStation 4, iine logo inoonekwa ipapo inoshongedza matemba ese.
Iyo yemusoro yakasununguka kupfeka kwenguva yakareba, iine rupo padding pane iyo nzeve uye yakapfava furo inonongedza iyo inogadziriswa bhandi. Sonically, inopa yakasimba stereo odhiyo odhiyo, kunyange paine pamwe tad yakawandisa mabass, sezvo iyo pa-screen chiito inogona kurira zvishoma kuumbika pane dzimwe nguva.
Iyo maikorofoni yemosidirectional inopetwa nyore nyore kubva munzira yako kana isiri kushandiswa uye inogona kutenderedzwa kuburikidza ne-in-cable control box, iyo zvakare inokutendera iwe kuti uchinje vhoriyamu yako. Kufona kwekujekesa kunonakidza asi iyo mic inotora yakaringana ruzha rwekumashure kana ichienzaniswa nemamwe macioioid mics isu takaedza.
Pamutengo, haugone kukanganisa neTrust GXT 488 Forze-B. Iyo inonakidza, inonzwika zvine mutsigo uye kunaka kwayo kunoenderana zvakakwana neiyo PlayStation brand. Iyo yekutanga vhezheni inouya nhema asi pane anotarisa-meso, kunyangwe ichidhura zvishoma, bhuruu uye grey camouflage sarudzo dziripo.
Key specs - Mapuratifomu: PS4; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Aihwa; Amp / kure: Ehe
Vimba Mutambo GXT 488 Forze-B [Zvakanyoreswa zviri pamutemo kune PS4] Mutambo weGameset wePlaystation 4 ine Flexible Microphone uye Inline Remote Control - Bhuruu
£ 29.99 Tenga izvozvi
6. PuroGamer Gaming Headset: Iyo yakanakisa vhoriyamu-inogumira mahedhifoni
Price: £ 65 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Kana iwe uchida yakanaka yemitambo odhiyo pasina kukanganisa yako aural hutano, iyo PuroGamer ingori tikiti. Iyi wired headset inoita poindi yekudzora vhoriyamu kusvika pamakumi masere nemakumi mashanu emadhivhuru, ndipo panonzwika ruzha kumaeardrum ako kana ukateererwa kwenguva yakareba. Hunhu hwekurira hunonakidza uye, kusiyana nemazhinji mahedhiyo emitambo, hainyanyi kusimbisa mabass, ichiitira ruzivo rwakanaka rwekuteerera. Iwo epakati uye mazwi anonyanya kupenga, saka iwe unonzwa ese mazwi eunofarira nhaurirano-inorema RPGs nekujeka.
Iyo 1.4m yakareba tambo ine splitter inotungamira kune 3.5mm uye USB Type-A yekubatana, ichikupa iwe kuchinjika mumabatiro aunoita, uye zvakare in-in-tambo yekudzora bhokisi, iyo inokutendera iwe mbeveve yako mic uye yekudzora vhoriyamu. Iyo mic inosimudza uye inosarudzika izwi rako chaizvo, kusefa rakadzikama huwandu hwenzwi uye kana urikutamba wega, inobviswa zviri nyore.
Vhoriyamu yakaringana inogona kunge isingave yemunhu wese, asi kana iwe uchida kutarisira nzeve dzako uchitamba, iyo PuroGamer ichakubatsira iwe kuzviita usingabayire odhiyo mhando.
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: USB Type-A, 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / kure: Aihwa
PuroGamer Gaming Headset - Yakachengeteka, Vhoriyamu Kukamura Wired Mahedhifoni evana neVakuru vane Dynamic Ruzha uye Noise-Kanzura Gaming Mic yePC, Mac, PS4, Xbox 1, iPad, Nhare mbozha naPuro Sound Labs
£ 59.99 Tenga izvozvi
7. Fnatic React: Zvakanyanya kupfuura esports mari-mukati
Price: £ 70 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Kunyangwe zvaunogona kufunga, iyo Fnatic React haisi yekungobata mari kubva kune imwe yenyika dzinozivikanwa esports mabrands. Iyo yakanakisa-kutenderera-kutenderera mahedhifoni ayo akasununguka, anonzwika zvikuru uye anoratidzira yakanyanya yepamusoro-mhando michina inogoneka.
Yayo hombe uye yakapfava-yakapfava faux-yeganda nzeve inoita kuti kunyange iwo akareba zvikamu zvive zvinonakidza uye zvinesimba mabass anotora chigaro chemberi mune ruzha rwenzvimbo zvine hunyanzvi hwakaenzana nemakwikwi emitambo mupfungwa. Iyo haina chero akakosha maficha ekutaura nezvayo uye iwe hautore chero imwe yekuwedzera accessories, asi izvo iwe zvaunowana ndezvakanakisa-kurira mahedhifoni aunogona kupfeka uchifara kwemaawa.
Verenga zvakakwana Fnatic React ongororo for details
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 53mm; Connection: 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Aihwa; Amp / kure: Ehe
Fnatic REACT Gaming Headset yePS4 / PC ine 53mm Dhirairi, Stereo Ruzha [playstation_4]
£ 69.99 Tenga izvozvi
8. SteelSeries Arctis 1 Wireless yeXbox: Inonyaradza kuyambuka kwepuratifomu
Price: £ 99 | Tenga izvozvi kubva kuSimbiSeries
Regedza zita racho: iyo yepakati-renji Arctis 1 Wireless yeXbox inoshanda futi kune iyo PS4, PC uye switch, pamwe neApple zvishandiso. Kana Xbox Series X yatanga, ichazoshandira izvozvo futi. Chivhariso chemusoro wemusoro wemusoro we USB-C mune yako console yesarudzo (kuburikidza neakapihwa USB-A adapta, mune zvimwe zviitiko) uye iyo Arctis 1 Wireless inobatana ipapo ipapo. Ruzha rwemhando yacho rwakanyanya, kuendesa inonyudza uye yakajeka kurira kwenzvimbo, uye iyo 2.4GHz isina kurasikirwa yekubatana inovimbisa Ultra-yakaderera latency kutamba.
Iyo Arctis 1 Wireless inopfuura ingori huru-kurira mahedhifoni. Yayo 'Discord-Certified' inogadziriswa boom maikorofoni inotumira izwi rako zvinonzwika uye zvakajeka uku ichicheka chena kumashure ruzha nekuda kwayo bidirectional ruzha-kudzima kugona.
Iyi nyaradzo yemusoro wepamusoro inogona kunge iri nzvimbo yayo huru yekutengesa, zvakadaro. Iyo simbi-yakasimbiswa musoro bhanhire inogadzira iyo snug fit asi inoramba iri comfy nekuda kweiyo furuji padding padding, uye iyo nzeve ivo pachavo vane yakapfava, yakasvibira yemukati iyo inopa nzeve nzvimbo yakawanda yekufema.
Verenga zvakakwana SteelSeries Arctis 1 Wireless yeXbox ongororo nokuti zvakawanda
Key specs - Mapuratifomu: Xbox One, PS4, PC, Nintendo Chinja, Android; Saizi yekutyaira: 40mm; Connection: USB-C 2.4GHz (isina waya), 3.5mm (wired); Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / kure: Aihwa
SteelSeries Arctis 1 Wireless yeXbox - Wireless Gaming Headset - USB-C Wireless - Inowoneka clearcast Microphone - YeXbox, PS4, Nintendo Shandura, Android (Xbox One)
£ 99.99 Tenga izvozvi
9. Turtle Beach Atlas Three: Inzwa wega
Price: £ 62 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iyo Atlas Tatu inopa yakasarudzika ficha: iwe unogona kuzvinzwa iwe pachako. Izvi zvinogona kudonhedzwa pasi kana kuremara zvachose kana uchida, asi nekuve nechinhu ichi kuchakutadzisa kubva kune hasha. Kana iri yemhando yepamusoro, ine yakakurumbira yepakati-bass slam, yakanaka treble yekuwedzera uye yekuparadzanisa chiridzwa, asi ichirira padiki pakazara kana pa - screen chiito chakakomberedza.
Dhizaini-yakangwara, iyo headset ine flip-up mic, zvinyoro-nzeve nzeve uye yakakwana padding kumusoro kwebhandi, ichiita sarudzo yakanaka kune avo vedu vanopfeka magirazi ekuverenga. Iyo chete bakoat: inoda kudzoreredzwa nekuda kweyakavakirwa-mukati amp kusangana, kunyange ichizvirumbidza inoyevedza makumi mana-awa bhatiri hupenyu.
Key specs - Mafurati: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Ehe; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / kure: N / A
Turtle Beach Atlas Three Amplified Gaming Headset - PC, PS4, Xbox One uye Nintendo Chinja
£ 48.99 Tenga izvozvi
10. Audio-Technica ATH-G1: Yakanyanya kunaka-kutenderera
Kana iwe uchitsvaga yakakomba odhiyo odhiyo, maikorofoni yakanakisa uye yakanyatso kugadzikana dhizaini iyo inokurega iwe mutambo kwemaawa, iyo Audio-Technica ATH-G1 isarudzo yakanaka.
Ruzha rwemhando iri muDVD-Technica's DNA uye inouya kuburikidza neG1's 45mm madhiraivha - kupatsanurwa kwechiridzwa kunonakidza, siginicha inodziya-inonzwika inouya nenyasha uye mabass anotambanukira kumatunhu epasi enzvimbo dzakadzika. Kunyangwe usina mabhero ese uye miridzo yemamwe mahedhifoni emitambo, haufanire kukanganwa ino naka yemitambo mahedhifoni. Iko kune zvakare isina waya sarudzo inowanikwa zvakare - iyo ATH-G1WL - kunyangwe iri kudhura zvakanyanya.
Key specs - Mafurati: PC, PS4, Xbox Rimwe; Saizi yekutyaira: 45mm; Connection: 3.5mm; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / Remote: Aihwa
Audio-Technica ATH-G1 Yekutanga Kutamba Musoro
£ 149.00 Tenga izvozvi
11. HyperX Cloud Sanganisa: Iyo yakanakisa mbiri-chinangwa headset
Price: £ 180 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iyo HyperX Cloud Musanganiswa ndeyemusoro-soro wemusoro unoenderana neese mapuratifomu emitambo uye zvinobudirira zvakapetwa kuita senge mahedhifoni eBluetooth.
Unhu hwemumhanzi hunonakidza zvisinei nekuti urikushandisa Cloud Mix wired kana waya. Isu hatisi kutaura audiophile mazinga eruzha asi pane huremu kumabhasi, ruzivo pakati pepakati uye zvine mutsindo kupatsanurwa kwechiridzwa. Kana wired iwe uchigona kukohwa iwo mabhenefiti ehi-res odhiyo mitambo yenziyo uye kutaurirana zvakaburitswa zvakajeka uye nekujeka chaiko. Kana uchiteerera muBluetooth mode pane rutsigiro rwe aptX codec mukuwedzera kune AAC uye SBC, inova huru yekuwedzera.
Iyo mic inosvikika inoshanda mushe mukutaurirana kwemutambo uye kune zvakare iri-yakavakirwa mic kuitira kana iwe uri kushandisa iyo headset zvisina waya. Izvo hazvina kunyatso kujeka seyayo inowoneka shamwari asi zvakaringana kutaurirana kwefoni.
Iko pasina kupokana zvirinani mahedhifoni eBluetooth uye mahedhiyo emitambo kunze uko, asi sechigadzirwa-chechipiri-chinangwa, iyo Cloud Mix yakaoma kurova.
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 40mm; Connection: 3.5mm jack, Makaralı; Yakakomberedza ruzha: Aihwa; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / kure: Aihwa
HyperX HX-HSCAM-GM Cloud Sanganisa - Wired neBluetooth Mutambo wemusoro
£ 139.99 Tenga izvozvi
12. Asus ROG Strix Fusion 700: Multi-chikuva mitambo
Price: £ 220 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Asus 'ROG Strix Fusion 700 ndeye akasiyana-siyana, akawanda-mapuratifomu emitambo mahedhiyo ayo anozvirumbidza nekunyaradza kwakanyanya, kutaridzika, uye hunonakidza mhando yemhando. Yayo kiyi yekutengesa poindi kugona kushandisa panguva imwechete Bluetooth uye wired sosi - kuti iwe ugone kupindura inopinda foni kubva kune yako smartphone uchinyudzwa mumutambo wako.
Sonically, aya ane anonakidza kurira siginecha: iyo yepakati-bass inodudzwa, iyo mids yakapfava uye kune yakawanda inofamba simba; uye neinoyevedza ESS 9018 DAC yakavakirwa-mukati, vanounza ruzha runobata. Iyo yekurekodha mhando haina kushata, chero.
Kumwe kunhu, iyo headset inoratidzira yakasarudzika RGB mwenje, iyo inowirirana nezvimwe Aura Sync-inogoneswa zvigadzirwa. Iyo Fusion 700 inonakidza uye yayo flip-to-mbeveve mic inoita kuti zvive nyore kutaura muchivande. Padivi rakashata, mhando yaro yekuvaka - kureva yakasununguka micro-USB chinobatanidza - inogadzira chikonzero chekunetseka.
Key specs - Mafurati: PC, PS4, Nintendo Chinja, nhare; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: USB, Makaralı; Yakakomberedza ruzha: Bongiovi Acoustics 7.1; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / kure: Aihwa
ASUS ROG Strix Fusion 700 Gaming Headset neHi-Fi-Giredhi ESS DAC uye Amp uye 7.1 Yakakomberedza uchienda kwePC, Console neMobile Kutamba neBluetooth 4.2.
£ 189.99 Tenga izvozvi
13. Astro A40TR: Iyo yakanakisa headset yemakwikwi emitambo
Price: £ 250 | Tenga izvozvi kubva kuAstro
Astro inopa zvitatu zveA40TR - imwe yakagadzirirwa PC / Mac, imwe yekushandisa paPlayStation uye imwe yekushandisa paXbox.
Kunyangwe iwe uchitamba paPlayStation kana Xbox, yechina-chizvarwa A40TR iri pakati peakanyanya kurira mahedhifoni. Dhizaini yaro yakavhurika-kumashure inoreva kuti ine rakapamhamha rakapamhamha ruzha, iro rakanakisa pakuteerera tsoka kana kunyange kunakidzwa nenzvimbo mumitambo yakavhurika-yepasirese. Yakasununguka zvakare: akapfava ematehwe akakwenenzverwa mapedhi anoita kuti igadzikane kwemaawa ekutamba, uye ayo asingaonekwe ruzha-kudzima mic inowedzera hupenyu hwe headset.
Kana iri iyo MixAmp Pro iyo inouya inosanganisirwa, inopa yakanakisa, isina ruzha yemhando yemhando. Tarira, kana iwe uchida iyo isina waya waya yeA40TR, uchafanirwa kuwana iyo A50 panzvimbo.
Key specs - Mafurati: PC, PS4, Xbox Rimwe; Saizi yekutyaira: 50mm; Connection: 3.5mm, Manyiminya, USB; Yakakomberedza ruzha: Dolby 7.1; Ruzha-kudzima mic: Ehe; Amp / Remote: SanganisaAmp Pro
Tenga izvozvi kubva kuAstro
14. SteelSeries Arctis Pro Wireless: Iyo yepamusoro premium isina waya mahedhifoni ePC nePS4
Price: £ 300 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Kana iwe uri PC kana PS4 gamer, mahedhifoni haawane zvirinani kupfuura iyo SteelSeries Arctis Pro Wireless. Iyi headset inokutendera iwe kutamba mitambo yako yaunofarira mune yakanyatso nyudza dhizaini nemadhiraivha ayo ari kuburitsa yakakwira-resolution odhiyo ku40,000Hz. Iyo inoratidzira isina kurasikirwa odhiyo odhiyo yePc uye PS4, neruremekedzo rweasina waya transmitter, uku ichipa Bluetooth kubatanidza kwefoni nhare. Iyo mbiri bhatiri sisitimu inokutendera iwe kubhadharisa bhatiri rimwe mune rekutepfenyura dock iwe uchishandisa imwe mune iyo headset, ine yega yega inogara kusvika kumahora makumi maviri, saka hauzombobatwa mupfupi pabhatiri. Yakasarudzika yekuvaka mhando, maikorofoni yekudyira uye kugona kugadzirisa yako odhiyo ruzivo kuburikidza neyekutepfenyura inoita iyi headset sarudzo yekumira yevatambi vepamusoro vanokoshesa mutambo wavo zvakanyanya.
Key specs - Mapuratifomu: PC, PS4, Xbox One (kuburikidza ne3.5mm chete), nhare; Saizi yekutyaira: 40mm; Connection: 2.4GHz / Bluetooth (headset), 3.5mm, USB; Yakakomberedza ruzha: DTS Nhare mbozha: X v2.0; Ruzha-kudzima mic: Aihwa
SteelSeries Arctis Pro Wireless - Gaming Headset - Hi-Res Mutauri Vanotyairi - Dual Wireless (2.4G & Bluetooth) - Dual Battery System
£ 289.99 Tenga izvozvi
Iwo AKAKOSHA mahedhifoni eXbox Series X uye Series S
Wedzera kugadzirwa neakanakisa asina waya misoro yehofisi